Yintoni ukuhlukana kwecawa kunye nombuso? Lo ngumbuzo omuhle kakhulu - kunye nombuso mhlawumbi enye yeengcamango ezingaqondakaliyo, ezingabonakaliyo kunye nezikhohlakeleyo kwiingxoxo zezopolitiko zaseMerika, zomthetho nezenkolo namhlanje. Wonke umntu unengcamango, kodwa ngelanga, ezininzi zezo mpendulo zibuhlungu kakubi.
Ukuhlukana kwecawa kunye nelizwe akuqondanga nje kuphela, kubaluleke kakhulu.
Leyo mhlawumbi enye yamaphuzu ambalwa apho wonke umntu kumacala onke enxaxheba angavumelana ngokukhawuleza - izizathu zabo zokuvuma zingahluka, kodwa zivuma ukuba ukuhlukana kwecawa kunye nelizwe kungomnye wemigaqo-siseko ebalulekileyo kwimbali yaseMelika .
Yintoni "iCawa" kunye ne "State"?
Ukuqonda ukuhlukana kwecawa kunye nelizwe kunzima ukuba sinokusebenzisa ibinzana elilula. Kukho, emva koko, akukho "necawa" enye. Kuninzi imibutho yonqulo eUnited States ithatha amagama ahlukeneyo-icawa, isinagoge , itempile, iHolo yoBukumkani kunye nokunye. Kukho namanye amaninzi amaqumrhu angamkeli ezi zihloko zonqulo, kodwa ezilawulwa yimibutho yonqulo - umzekelo, izibhedlele zamaKatolika.
Kwakhona, akukho "rhu lumente" olulodwa. Kunoko, kukho amanqanaba amaninzi karhulumente kumaziko aseburhulumenteni, ommandla, wengingqi kunye nendawo.
Kukho iintlobo ezininzi zemibutho karhulumente - iikomishoni, amasebe, ii-arhente kunye nokunye. Ezi zinokuthi zonke zibe namazinga ahlukeneyo okubandakanyeka kunye nobudlelwane obuhlukeneyo neentlobo ezahlukeneyo zemibutho yonqulo.
Oku kubalulekile kuba kugxininisa into yokuba, "ukuhlukana kwecawa kunye nombuso," asikwazi ukuthetha ngecawa elilodwa, elingokoqobo kunye nesinye isizwe.
Le miqathango ifanekiso, efuna ukukhomba into enkulu. "Icawa" kufuneka ithathwe njengalowo nawuphi na umbutho wenkolo ohleliweyo kunye nemfundiso / imfundiso, kwaye "urhulumente" kufuneka uthathwe njengalowo nawuphi na umzimba karhulumente, nayiphi na inhlangano esebenzayo karhulumente, okanye nayiphi na isiganeko esixhaswe nguRhulumente.
Loluntu kunye noLawulo lweZakhiwo
Ngako oko, ibinzana elichanekileyo kunokuba "ulwahlulo lwecawa kunye nelizwe" lingaba yinto efana "nokwahlukana kwenkolo kunye nolawulo lwasemthethweni," kuba igunya lezenkolo kunye nezolawulo loluntu ngokubhekiselele kubomi babantu kwaye akufanele lityalomali kubantu okanye kwimibutho efanayo. Ngokwenza oko, oku kuthetha ukuba igunya likarhulumente alikwazi ukunyanzelisa okanye ukulawula amaqumrhu enkolo ahleliweyo. Urhulumente akakwazi ukuxelela amaqela enkolo ukuba ashumayele, njani ukushumayela okanye ukuba ashumayele. Igunya lolawulo lombutho kufuneka lisebenzise indlela "yezandla," ngokungabancedisi okanye ukuphazamisa inkolo.
Ukwahlukana kwecawa kunye nelizwe kungendlela yesibini, nangona kunjalo. Akukhona nje ukukhawulela oko urhulumente akwenzayo ngonqulo, kodwa nawaphi amaziko enkolo angayenza noRhulumente. Amaqela angokwenkolo akakwazi ukulawula okanye ukulawula urhulumente. Akunakubangela urhulumente ukuba athathe iimfundiso zawo njengomgaqo-nkqubo kuwo wonke umntu, akakwazi ukubangela urhulumente ukuba avimbele amanye amaqela, njl.
Ingozi enkulu kwinkululeko yonqulo ayikho urhulumente - okanye ubuncinci, kungekhona urhulumente osebenza wedwa. Sisoloko sineemeko apho amagosa karhulumente karhulumente athatha ukunyanzelisa nayiphi na inkolo okanye inkolo ngokubanzi. Okuqhelekileyo yimibutho yonqulo yangasese esebenzisana noorhulumente ngokuba neemfundiso zabo kunye neenkolelo eziququzelelwe kumthetho okanye kumgaqo-nkqubo.
Ngaloo ndlela, ukwahlukaniswa kwecawa kunye noluntu kuqinisekisa ukuba abemi babucala, xa besenza indima yegosa elithile likarhulumente, abanakho naluphi na uhlobo lweenkolelo zabo zonqulo ezizimeleyo. Ootitshala beSikolo abakwazi ukukhuthaza unqulo lwabo kubantwana babanye abantu, umzekelo ngokukhetha ukuba yeyiphi iBhayibhile eya kufundwa kwiklasi . Amagosa asekuhlaleni angenakufuna iinkqubo ezithile zonqulo kubasebenzi baseburhulumenteni, umzekelo ngokusingatha imithandazo ethile, evunyiwe.
Iinkokeli zikaRhulumente azikwazi ukwenza amalungu enkolo ukuba azive ngathi azifunwayo okanye abemi beklasi lesibini ngokusebenzisa isikhundla sabo ukukhuthaza imfundiso ethile yezenkolo.
Oku kufuna ukuzithiba kokuziphatha kumagosa karhulumente, kwaye kwinqanaba elithile ngabemi basekhaya - ukuzithiba okuyimfuneko yokuba uluntu lube lukholo lwabantu ngaphandle kokuhla kwimfazwe yonqulo. Iqinisekisa ukuba urhulumente uhlala nguhulumeni wabo bonke abemi, kungekhona urhulumente wenkonzo enye okanye isithethe esinye senkolo. Iqinisekisa ukuba ukwahlukana kwezopolitiko kungabikho kwiinkonzo zonqulo, kunye namaProthestani alwa namaKatolika okanye amaKristu axabela amaSulumane "ngesabelo sabo" sekhredithi yomntu.
Ukuhlukana kwecawa kunye nombuso kukubakho inkululeko ebalulekileyo yomgaqo-siseko okhusela abantu baseMerika kwixinzelelo. Ikhusela bonke abantu kwiinkcazo zonqulo zaliphi na iqela lenkolo okanye isiko kwaye likhusela bonke abantu kwiinjongo zikaRhulumente zokunyanzelisa abanye okanye nawaphi na amaqela enkolo.
Inkolelo-ntetho: Ukungabikho koMntu akunakukwazi ukuchaza uMvelaphi woBume
2015 Iintshukumo zamagama
Iintandathu ezithintekayo iiBlues-Rock Guitarists